အဲလ်ဘာ့တပ်စ် မာ့ဂ်နပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မယ်တော် မာရီမှ သူတော်စင် အဲလ်ဘာ့ကို ကိုယ်ထင်ပြနေပုံ (Vicente Salvador Gomez ၏ လက်ရာ)
၁၂၈၀ နိုဝင်ဘာ ၁၅
သူတော်စင်အဖြစ် ပုပ်ရဟန်းမင်း ထောက်ခံ
၁၆၂၂, ရောမ by ပုပ်ရဟန်းမင်း ဂရက်ဂါရီ (၁၅)
၁၉၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၆, ဗာတီကန်စီးတီး by ပုပ်ရဟန်းမင်း ပိယပ်စ် (၁၁)
ကိုလုံးမြို့၊ စိန့် အန်ဒရူးဘုရားကျောင်း
ဒါမီနီကန် အလေ့အထ၊ ဒေါက်ခြာ၊ ကျမ်းစာအုပ်၊ ငန်းတောင်(ကလောင်တံ)
သဘာဝသိပ္ပံကို ပျိုးထောင်သူများ၊ ဆေးကျောင်းသားများ၊ ဒဿနဆရာများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ Scientific career
ပလေတို, အရစ္စတိုယ်, အာဗီဆန်နာ, Plotinus, Proclian, Pseudo-Dionysius, Al-Farabi, Averroes, Avicebron, Maimonides, Jordan of Saxony
တောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ် နှင့် ယေဘုယျသဘော နှောင်းပိုင်း ခရစ်ယာန်အခြေပြု ဒဿန; Meister Eckhart ၊ Nicholas of Cusa
အဲလ်ဘာ့တပ်စ် မာ့ဂ်နပ်စ် (သို့) အယ်လ်ဘာ့တွတ်စ် မာ့ဂ်နွတ်စ် (လက်တင်: Albertus Magnus[မှတ်စု ၁] OP (c. 1200 – 15 November 1280) သည် ဂျာမန် ကတ်သလစ် စိန့်ဒါမီနီကန်ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး၊ ဒဿနပညာရှင်၊ သိပ္ပံဆရာ၊ ကတ်သလစ်ဂိုဏ်း၏ သူတော်စင်အဖြစ် ချီးမြှောက်ခံရသူ ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကြီးကျယ်သော သူတော်စင် အဲလ်ဘာ့တပ်စ် (Saint Albert the Great) (သို့) ကိုလုံးမြို့မှ အဲလ်ဘာ့ (Albert of Cologne) ဟူ၍လည်း သိရှိကြသည်။ ၎င်း၏ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော သက်တမ်းအတွင်း Doctor universalis နှင့် Doctor expertus ဟူ၍လည်းကောင်း အသက်ကြီးပိုင်းတွင် မာ့ဂ်နပ်စ် (Magnus) တပ်၍လည်းကောင်း သိရှိကြလေသည်။ James A. Weisheipl နှင့် Joachim R. Söder တို့ကဲ့သို့ ပညာရှင်များက ၎င်းကို အလယ်ခေတ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံး ဂျာမန် ဒဿနပညာရှင်၊ (ခရစ်ယာန်)ဘာသာရေးပညာရှင်ဟု ညွှန်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ကတ်သလစ်ဂိုဏ်းက ၎င်းကို "Doctor of the Church" ဘွဲ့ရ (၃၆ ဦးထဲက) တစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
↑ လက်တင်: Albertus Teutonicus, Albertus Coloniensis
↑ St. Albertus Magnus။ Britannica။
↑ Weisheipl၊ James A. (1980)၊ "The Life and Works of St. Albert the Great"၊ in Weisheipl၊ James A. (ed.)၊ Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays၊ Studies and texts၊ 49၊ Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies၊ p. 46၊ ISBN 978-0-88844-049-5
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဲလ်ဘာ့တပ်စ်_မာ့ဂ်နပ်စ်&oldid=681694" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။